မိုးတိမ်၏ ဘာညာသာရကာ နေကြာ ကွာစိ: July 2007
ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာ Virus/spyware ထိသွားလို့ .. Antivirus/spyware နဲ့ရှင်းပြီးသွားပေမယ့် စက်ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ... "Can't find the specific file .. pls locate ....." စတဲ့ Error တွေ တက်တက်လာတတ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့်တော့ spyware ကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ... စက်ထဲမှာ အဲ့ဒီကောင်တွေ မရှိတော့ပေမယ့် . အဲ့ဒီလို error တက်လာရင် စိတ်ရှုပ်ရပါတယ် ... အဲ့ဒါကို ဖြေရှင်းချင်တယ်ဆိုရင် .. Hijackthis application လေးကို သုံးနိုင်ပါတယ် .. စက်ဖွင့်လိုက်လို့ တက်လာတဲ့ Error မှာဖော်ပြတဲ့ File name ကိုမှတ်ထားပြီး Hijackthis ကို Run လိုက်ပါ။ Run ပြီးသွားရင် သူဟာ PC Startup Object တွေကို List တစ်ခုလုပ်ပြီးပေးပါလိမ့်မယ် .. အဲ့ဒီထဲကမှ မိမိ စက်မှာ Error တက်စေတဲ့ ဖိုင်ပါတဲ့ အချက်ကို check လုပ်ပြီး .... Remove/fix လုပ်ပေးပါ။ အဲ့ဒါဆိုရင် စက်နောက်တစ်ခါဖွင့်တဲ့အခါကျရင် ဘာError မှ မတက်တော့ပါဘူး။ Hijackthis ကို ဒီနေရာမှာ ယူပါ ...
>>>> Download Hijackthis <<<<<
>>>> Mirror Link <<<<<
ရေးသားသူ - မိုးတိမ် at 12:05 PM0comments
Labels: Anti-Spyware, Anti-Virus, သိစေချင်တာလေးတွေ
Experience နဲ့ အသက်ကြီးမသွားစေနဲ့
မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိကြတဲ့ လူငယ်တွေ၊ ကျောင်းပြီးလို့ အလုပ်စလုပ်တဲ့ လူငယ်တွေ၊ ကျောင်းတက်ရင်း အလုပ်လုပ်ကြတဲ့ လူငယ်တွေ တော်တော်များများဟာ ... experience လိုချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ ကုမ္ပဏီတွေမှာ၊ အလုပ်ရုံတွေမှာ ကျွဲလို၊ နွားလို အခိုင်းခံပြီးတော့ လုပ်နေကြတာတွေ တွေ့နေရတယ်ဗျာ .. စိတ်မကောင်းစရာဘဲ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လစာနဲ့ စားဝတ်နေရေး မညီမျှတဲ့အတွက် တော်တော်များများ ဒုက္ခရောက်ကြတယ်။ လုပ်ရတာက ကျွဲလို နွားလို့ ... ပေးတော့ လစာက တစ်ပဲနှစ်ပြား .....။ လုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်း အဲ့ဒါမျိုးတွေကို စောင့်နေကြတယ် ထင်ပါရဲ့။ ရန်ကုန်မှာဆိုရင် ကိုယ်ပိုင်အိမ် ရှိတဲ့သူတွေက ပိုဆိုးကြတယ် ..
.. လစာရချင်ရ မရချင်နေ .. အလုပ်လုပ်နေရ ပြီးရော .. လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံရ ပြီးရောဆိုပြီး လုပ်နေကြသူတွေ တစ်ပုံကြီး။ အဲ့ဒါဟာ နောက်ဆက်တွဲ ဘာတွေဖြစ်ပေါ်စေသလဲဆိုရင် အလုပ်သမားတွေ ဖောင်းပွလာတယ်။ ဆိုလိုတဲ့သဘောက ဈေးပေါပေါနဲ့ အလုပ်သမားတွေ၊ ၀န်ထမ်းတွေ ပေါများလာတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ကျွန်တော် ရည်ရွယ်တာက အလုပ်စလုပ်တဲ့ လူတွေကိုနော် .... Pro ကြီးတွေ မပါဘူး။ ကျွန်တော့်အသိတစ်ယောက် အကြောင်းပြောပြချင်တယ်။ သူကဘွဲ့ရပါ။ ကျွန်တော့်ထက်တော့ အသက်အများကြီးကြီးတယ် ..... သူတို့တွေက အရေးခင်ကာလမှာ ကျောင်းနားလိုက်ရတာတွေ မနည်းဘူးဆိုတော့ ဘွဲ့လည်းရရော အသက်က တော်တော်ကြီးနေကြပြီ .. ၂၄-၂၅ လောက် ရှိနေပြီ။ သူလည်းဒီလိုပဲ ... Experience လိုချင်တယ်ဆိုပြီး ကုမ္ပဏီမှာ ၀င်လုပ်တာ .... ၇နှစ်လောက်ရှိတယ် .. လစာက ခြောက်လကို ၅၀၀၀၊ ၁၀၀၀၀ လောက်တော့တိုးပါရဲ့ဗျာ .... နောက်ဆုံး အဲ့ဒီ ကုမ္ပဏီကနေလည်းထွက်ရော အသက်က ၃၂ နှစ်ရှိနေပြီ .... တစ်ခြား ဘယ်နေရာမှ အလုပ်လျှောက်ဖို့လည်း အဆင်မပြေတော့ဘူး။ အသက်က ကြီးသွားပြီကို သူရခဲ့တဲ့ ၇ နှစ်တာ experience က သူ့ကို ဘာမှမကူညီနိုင်တော့ဘူး။ နောက်ဆုံးတော့ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး အိမ်မှာ ဓါတ်ပုံဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်လေ။ ဒါပါပဲ .. ရည်မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက်က တစ်ခြားစီ ... ဒါက အားလုံးကို ရည်ညွန်းတာမဟုတ်ဘူးနော် ... ယေဘူယျ ကိုပြောတာ။ ကျွန်တော် ပြောချင်တာက .. Experience ကိုမက်ပြီး .. ကိုယ့်ဘ၀ကို မနှစ်မြှုပ်သွားစေနဲ့။ ကိုယ်က အသိရှိဖို့လိုတယ် .... အဲ့ဒီ Experience က ကိုယ့်အတွက် ရေရှည်မှာ အထောက်အကူပြုနိုင်သလားဆိုတာကို သိထားရမယ်။ တစ်နေရာမှာ .. Experience အများကြီးမယူပါနဲ့ ... ကိုယ် Experience ယူနေတဲ့နေရာဟာ ကိုယ့်ဘ၀တိုးတက်ဖို့အတွက် အထောက်အကူဖြစ်သလားဆိုတာကိုလည်း စမ်းစစ်ကြည့်ရမယ်။ Experience ဆိုတာ တစ်ခြားနေရာမှာလဲ ယူလို့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ဘ၀တိုးတက်ဖို့အထောက်အကူမဖြစ်တဲ့ နေရာမှာ အကြာကြီးနှစ်မြှုပ်မနေပါနဲ့။ နေရာလေးပြောင်းကြည့်ပါ .... ဆိုရိုးလေးတောင်ရှိပါတယ် .. “တစ်ရွာ မပြောင်း သူကောင်းမဖြစ်တဲ့” .. လူတိုင်းကို အလုပ်ပြောင်းဖို့ တိုက်တွန်းနေတာမဟုတ်ဘူးနော် .. ကိုယ်လက်ရှိအခြေအနေကို ကိုယ်သာအသိဆုံးပါပဲ .... “ ကံ ၊ ဥာဏ် ၊ ၀ိရိယ ” သုံးခုပေါင်းနိုင်မှ တော်ရုံကျမှာလေ .. ဒါကြောင့် လက်ရှိအခြေအနေကို စမ်းစစ်ပါ .. စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပါ ... လုပ်ရေကိုင်ရေ ရှိသူတိုင်း အောင်မြင်ဖို့ လမ်းစတွေ အများကြီးရှိပါတယ် .. တစ်နေရာတည်းမှာပဲ နှစ်မြှုပ်မနေပါနဲ့ .... “မမြင်ဘူး .. မူးမြစ်ထင်” “ရေတွင်းထဲက ဖားသူငယ်”လို အဖြစ်မခံပါနဲ့ ..... သိထားရမှာက Experience က ကိုယ့်ကို အသက်ကြီးသွားစေတယ်ဆိုတာပါပဲ ........ အချိန်ဆိုတာ ပြန်ရယူလို့မရနိုင်တဲ့ အရာပါ။
ရေးသားသူ - မိုးတိမ် at 11:12 AM0comments
တော်တော့်ကို စိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဗျာ .. ဘလော့မတင်ဖြစ်တာလည်း တစ်လကျော်နေပြီ .. ကွန်နက်ရှင်က တော်တော်ကို စိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းတယ် ..... ဒီနေ့တောင် ရုံးစောစောရောက်လို့ လက်ကမင်းပြီးဝင်လိုက်တာ ရသွားလို့ ..... အိမ်မှာလည်း ကော်နက်ရှင်ကောင်းရင် တင်ဖို့ဆိုပြီးရေးထားတဲ့ပိုစ့်တွေ ၇ ခုလောက်က Harddisk ပျက်လို့ ပါသွားတယ် .. နမျောလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်း ..... Harddisk ပျက်တယ်ဆိုလို့ ပြောရဦးမယ်ဗျာ .. သူငယ်ချင်းတို့ရေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ Computer Sparနparts ၀ယ်တဲ့အခါ ဂရမ်တီပေးတယ်ဆိုရင် ၀ယ်ကတည်းက သေသေချာချာမေးထားပါ .... ကျွန်တော် ကောင်းကောင်းကြီးခံလိုက်ရပြီးပြီဗျ ..
ဒီလို .. ပြီးခဲ့တဲ့လက ကွန်ပျူတာရောင်းတဲ့ ဆိုင်ကြီးတစ်ဆိုင်မှာ Seagate တံဆိပ် IDE 80GB Harddisk တစ်လုံးဝယ်လိုက်တယ်ဗျာ။ ဂရမ်တီက ၂ နှစ်ပေးတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အမှတ်တမဲ့မို့ အသေးစိတ်မမေးမိလိုက်ဘူး။ ၀ယ်ပြီးတော့ ကျွန်တော့်အိမ်ကစက်မှာ Slave အနေနဲ့သုံးလိုက်တယ် .. လက်ရှိသုံးနေတဲ့ 40 GB ကို 1/2 ခွဲပြီး Window တင်ထားလိုက်တယ်။ တစ်ချို့အရေးကြီးတဲ့ဖိုင်တွေကို HD အသစ်ပေါ်ရွှေ့ထားမိလိုက်တယ်ဗျာ။ အဲ့ဒီလိုသုံးနေတာအကောင်း .. တစ်လတင်းတင်းပြည့်တဲ့နေ့ တစ်ကယ့်တစ်လကွက်တိပဲ .... စက်ကသုံးနေရင်းက Auto Restart ဖြစ်သွားတယ်ဗျာ . ပြီးတော့ စက်မတက်တော့ဘူး .... အစကတော့ window ဖြစ်တာပဲထင်ပြီး recover လုပ်ဖို့ကြိုးစားကြည့်တယ် .. နောက်မှ သတိထားမိလိုက်တယ် စက်က Slave ကို လုံးဝမသိတော့ဘူးဗျ .... အဲ့ဒါနဲ့ အဲ့ဒီ HD ကိုဖြုတ်ပြီး စက်ပြန်ဖွင့်လိုက်တော့ window တက်လာတယ် .. ဒါနဲ့ပဲ ကျွန်တော်လည်း ဂရမ်တီကဒ်နဲ့ ဆိုင်ကိုပြေးရတော့တာပေါ့ဗျာ .. ဆိုင်ရောက်တော့ သူတို့က ဟိုစစ်ဒီစစ်နဲ့ပဲပေါ့ .. ပြီးတော့မှကျွန်တော့်ကိုပြောတယ် ...
“အကို .. အကို့ HD က လောင်သွားပြီဗျာ့ မရတော့ဘူး”တဲ့ ....
“ဟာ .. ဒုက္ခပဲ .. ငါ့ အရေးကြီးတဲ့ Data တွေ အများကြီးပဲဟ .... ဒါဆိုရင် ငါ့ကို မင်းတို့ ၂နှစ် ဂရမ်တီပေးထားတာ ဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲ ...”လို့မေးလိုက်တော့ ဘာပြောတယ်ထင်လဲ ..
“အကို HD ကလောင်သွားတော့ ဘာမှလုပ်ပေးလို့မရဘူး .. ကျွန်တော်တို့ ဂရမ်တီပေးတဲ့ထဲမှာ လောင်တာမပါဘူး ..”တဲ့ဗျာ ... သေရော .. ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ ... ငွေ ၆၅၀၀၀ ကို တစ်လပဲခံတယ် .. ပြီးတော့ အထဲမှာလည်း အရေးကြီးတဲ့ Data တွေ .... ကျွန်တော်လည်း မကျေနပ်လို့ပြန်မေးတာပေါ့ ....
“ညီလေး .. ငါ့စက့်မှာက ဒီ HD ကို Slave အနေနဲ့သုံးတာ .... လောင်စရာရှိရင် .. ငါ Master သုံးတဲ့အလုံးကော ထိမှာပေါ့ .. ခုဟာက ငါ့စက်မှာ တစ်ခြားဘာမှ ထိခိုက်တာမရှိဘဲ .. မင်းတို့ဆီဝယ်တဲ့ HD ပဲကွက်လောက်သွားတာလေ .. ငါ့ဝယ်တာမှ တစ်လပဲရှိသေးတယ် .. မင်းတို့ တစ်ခုခုတော့လုပ်ပေးသင့်တယ်ကွာ ....”လို့ပြောလိုက်တော့ ..
“အကို့အနေနဲ့ကြည့်ရင်လည်း မှန်ပါတယ် . ကျွန်တ်ာတို့ကလည်း Service ပိုင်းကဖြစ်နေတော့ ဒါတွေကို ဆုံးဖြတ်ပေးလို့မရဘူး ... ဒီလိုလုပ်ပါလား အကိုမန်နေဂျာနဲ့ နက်ဖြန်ကျရင်လာတွေ့ကြည့်ပါလား ... သူဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲဆိုတာကို အကိုတစ်ခါတည်းသိနိုင်တာပေါ့ .. ပြီးတော့ ဒီလိုကိစ္စတွေက အကိုတစ်ယောက်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး .... လူတိုင်းနီးပါးဖြစ်နေကြတာပဲ .. ကျွန်တော်တို့လည်း စကားပြောရလွန်းလို့ ဂရမ်တီကဒ်မှာ တစ်ခါတည်း ရိုက်ထားတာ ”တဲ့ .. ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ ... ကျွန်တော်လည်း စကားတွေအများကြီးမပြောချင်တော့ဘူး ... ထပ်ပြောရင် ပြဿနာပဲတက်တော့မှာ .. ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကံနဲ့ကိုယ် ရှိပါစေတော့လေ ဆိုပြီး စိတ်လျော့လိုက်တယ် .... သူတို့ပြောတဲ့စကားကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်ဦး သူတို့ဆိုင်မှာ ၀ယ်နေတဲ့သူတွေ လူတိုင်းနီးပါးဖြစ်နေတာတဲ့ .. ဒါဆိုရင် ရှင်းနေတာပဲ သူတို့ဆိုင်က အရေအသွေးမကောင်းတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ရောင်းနေတယ်ဆိုတာ သူ့ကိုယ်သူဝန်ခံနေတာပဲ .... HD တစ်လုံးပျက်ဖို့ဆိုတာ တစ်ကယ်မလွယ်တဲ့ကိစ္စဗျာ့ .... အိမ်မှာ သုံးနေတဲ့ PIII အဟောင်းကဆိုရင် နှစ်ပေါင်းမနည်းတော့ဘူး .. ခုချိန်ထိဘာမှမဖြစ်ဘူး .. ခုဟာက UBS လည်းခံသုံးထားပါရက်နဲ့ ဖြစ်တာဆိုတော့ တော်တော့ကို စဉ်းစားစရာပဲဗျာ ... ဒါကြောင့် ကွန်ပျူတာအပိုပစ္စည်းဝယ်ရင် သေသေချာချာ မေးမြန်းပြိးဝယ်ကြပါလို့ ... သူငယ်ချင်းအားလုံးကို သတိပေးချင်ပါတယ် .... ကွန်ပျူတာနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုနေသူဟာ .. ကွန်ပျူတာတစ်ခုခုဖြစ်ရင် ဆုံးရှူံးနစ်နာမှုတွေ မနည်းပါဘူး .. ဒါကြောင့် အစစအရာရာ သတိထားမှ တော်ရုံကျမှာ .. ခုဆိုရင် ဈေးကွက်ထဲမှာ အရေအသွေးမကောင်းတဲ့ ပစ္စည်းတွေ မနည်းဘူး ... သတိထားပြီး သေချာမေးမြန်းပြီးဝယ်မှ ဖြစ်မှာ ... ကျွန်တော်တောင် ဆိုင်ကြီးပဲဆိုပြီးတော့ တစ်ချက် သတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားတယ်။ အများကြီး ဆုံးရှူံးခဲ့ရတယ် .....
ရေးသားသူ - မိုးတိမ် at 11:01 AM0comments